Chelsea iyo Barcelona oo barbaro galay tartanka Champions League-ga – Puntland Post
Posted on February 21, 2018 February 21, 2018 by Liban Yusuf
Chelsea iyo Barcelona oo barbaro galay tartanka Champions League-ga
Kooxaha Chelsea iyo Barcelona ayaa kulan xiiso iyo xamaasad badan oo ka tirsanaa lugta hore ee wareega 16-ka tartanka horyaalada kooxaha Yurub ee Champions League-ga ku yeeshay Garoonka Stamford Bridge ee magaalada London.
Ladabada kooxood ayaa kulankan ku kala baxay barbaro 1-1 ah, waxayna labada goolba yimaadeeen qeybtii danbe ciyaarta.
Willian oo ahaa xidigii kulanka ayaa Chelsea hogaanka u dhiibay daqiiqadii 62-aad, kadib markii uu kubbad uu ka leexsaday Busquets shabaqa meel hoose ka galiyay, wuxuuna sidoo kale goolka ka hor uu tiirka ku dhuftay kubbada.
Balse Lionel Messi ayaa daqiiiqadii 75-aad goosha barbarah u keenay kooxdiisa Barcelona, kadib markii uu shabaqa dhexdhigay kubbad sahlanayd oo uu xerada ganaaxa dhexdeeda u soo dhigay Iniesta.
Goosha Lionel Messi ka dhaliyay Chelsea waxay noqotay gooshii ugu horeysay ee uu shabaqa kooxdaas taabsiiyo 9 kulan oo ay wada dheeleen tartanka Champions League-ga.
Labada kooxood ayaa ku kala bixi doona kulanka lugta labaad ee wareega 16-ka tartanka Champions League-ga oo ka dhici doona magaalada Barcelona, waxaana faa’iido barbarahan ku qabta Barcelona, maadaama ay wadato gool marti ah.
Dhanka kale kooxda Bayern Munich ayaa 5-0 ugu awood sheegatay kooxda Besiktas ciyaar ay min laba ka dhaliyeen Muller iyo Lewandowsk, wuxuuna ahaa kulan kale oo ka tirsan wareega 16-ka ee Champions League-ga